Ch 17 John – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Yooxanaa / Ch 17 John
17:1 Ciise wuxuu ku yidhi waxyaalahaas, ka dibna, indhihiisii ​​kor u qaaday xagga samada, ayuu yiri: "Aabbaha, saacaddii ayaa gaaray: Wiilka aad u ammaanaan, Sidaa darteed Wiilka aad laga yaabaa in aad u ammaanaan,
17:2 sida aad la siiyey amar ay jidh leh oo dhan isaga ku, si uu nolosha weligeed ah siiyo kuwaad aad isaga siisay oo dhan.
17:3 Tanu waa nolosha weligeed ah: in ay aad u ogaataan, Ilaah runta ah oo keliya, iyo Ciise Masiix, kii aad soo dirtay.
17:4 Waxaan kugu ammaanay dhulka. Waxaan dhameystirnay in aad i siisay in ay u guttaan.
17:5 Haddaba Aabbaha, i ammaani naftaada gudahood, ammaantii aan kula lahaa intaan dunidu la weligood ahaa.
17:6 Waxaan Magacaaga nimankii aad i siisay inay ka dunida ku muujiyey. Kuwaagii bay ahaayeen, oo waxaad iyagii i siiyey. Oo iyana waxay eraygaaga waan xajiyey.
17:7 Hadda waxay ogaadaan in wixii aad i siisay oo dhan waa inaad ka.
17:8 Waayo, waxaan iyaga siin sheega erayada aad i siiyey. Oo iyana waxay hadalladaas ayaa aqbashay, oo ay si dhab ah u fahamsan yahay inaan kaa ka tegey, wayna rumaysteen inaad i soo dirtay.
17:9 Iyaga waan kuu baryayaa. Waxaan ha u ducayn dunida, laakiin waxaan kuu baryayaa kuwaad i siisay,. Waayo, waa kuwaagii.
17:10 Oo waxayga oo dhan adigaa iska leh, iyo in dhan adigaa anigaa iska leh, iyagana waan ku ammaanmay in this.
17:11 Oo in kastoo Anigu ma ihi adduunka, kuwani waa in dunida, oo anna waan idiin imanayaa. Aabbaha ugu wada quduusan, iyaga dhawri magacaaga, Kuwii aad i siisay,, si ay u waxaa laga yaabaa in mid ka mid, xataa sida aan waa mid ka mid.
17:12 Intaan iyaga la jiray, Oo waxaan iyaga u dhawrayay magacaaga. Waanan ilaaliyey, Kuwii aad i siisay,, oo ma jirin mid iyagii ah waa laga badiyay, wiilka halaagga maahee, marka laga reebo, si Qorniinku ahaado laga yaabaa in.
17:13 Oo haatan waxaan idiin imanayo. Laakiin waxyaalahaas Waxaan la hadlayaa adduunka, si ay u leeyihiin waxaa laga yaabaa in buuxnaanta oo aan ku faraxsanaa fikirayaan.
17:14 ayaan siiyey eraygaaga, iyo dunida ayaa iyaga necbaa. Waayo, iyagu ma kuwa dunida, sidaan, aad, ma ihi dunida.
17:15 Anigu waxba ma aan tukanayay oo aad u qaadan lahayd dunida ka baxdaan, laakiin in aad iyaga dhawri lahaa sharka ah ka soo.
17:16 Iyagu ma ay yihiin ee dunida, kaliya sida aan aniguba ma ihi dunida.
17:17 iyaga quduus kaga dhig runta. Hadalkaagu waa run.
17:18 Just aad igu dunida u soo diray, Waxa kale oo aan iyaga dunida ugu diray galay.
17:19 Oo waxaa iyaga u ah in ayaan quduus iskaga dhigaa, si ay u, aad, loo xagga runta quduus.
17:20 Laakiin Anigu waxba ma aan tukanayay iyaga oo keliya, laakiin sidoo kale kuwa ay hadalka u rumaysan doontaan ii in.
17:21 Sidaas oo dhan ay ka mid waxaa laga yaabaa in. Sida aad, Aabbaha, waa igu jirtaa, oo waxaan idiin ahay in, sidaas oo kale ayaa ay naga mid ah ee waxaa laga yaabaa in: in dunidu rumaysato inaad i soo dirtay.
17:22 Markaasaa ammaantii in aad i siiyey, Aan iyaga siiyey in, si ay u waxaa laga yaabaa in mid ka mid, sida aan sidoo kale waa mid ka mid.
17:23 Waxaan ahay iyaga oo ku, oo aad iigu jirtid. Sidaas waxaa laga yaabaa in ay moyee sida mid. Oo dunidu ku garato in aad i soo diray iyo in aad u jeclaaday iyaga, sida aad ayaa sidoo kale ii jeclaatay.
17:24 Aabbaha, Waxaan doonayaa in meeshaan joogo, Kuwii aad i siisay, sidoo kale waxaa laga yaabaa in la ii, si ay u ammaantaan aawadeed, taas oo aad i siisay inay arkaan. Waayo, waxaad i jeclaa intaan aasaasay dunida.
17:25 Aabbaha ugu kaliya, dunida ayaa aad ma u yaqaan. Laakiinse waxaan kuu yaqaan. Oo kuwanuna ogahay in aad i soo diray.
17:26 Oo waxaan ka dhigay magacaaga iyaga loo yaqaan, oo waxaan ka dhigi doonaa yaqaan, si jacaylka, kaas oo aad i jeclayd uu ku jiro iyaga, iyo si aan laga yaabaa in aan iyaga ku jiro. "